जातीय विभेदको ‘शान्त तलाउ’मा ढुंगा हान्ने रुपाहरु - NepaliEkta
जातीय विभेदको ‘शान्त तलाउ’मा ढुंगा हान्ने रुपाहरु
433 जनाले पढ्नु भयो ।
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले काठमाडौंमा डेरा खोज्दा भोगेको जातीय विभेदको घटना यतिबेला चर्चामा छ । पुस्तौंदेखि विभेद गर्दै र सहँदै आएको नेपाली समाजमा रुपा सुनारको नियति दलित समुदायले पाइलैपिच्छे भोग्दै आएको पीडा हो । यी र यस्ता घटनालाई वर्षौंदेखि चलिआएको परम्परा भन्दै प्रायः पीडितहरुले आफ्नै जात वा कर्मलाई दोष दिएर चुपचाप सहिदिन्छन् अनि परिवर्तनको वकालत गर्नेहरुले पनि नजरअन्दाज गरिदिन्छन् । परिणाम मान्छे मान्छेबीचको विभेद पुस्तान्तरण हुँदै समाजबाट हट्नै नसक्ने गरी जरा गाडेर बसेको छ।
यदाकदा केही घटनाले मात्र यसखाले चर्चा पाउने गर्दछन् र त्यसले विभेदकारी समाजका लागि गम्भीर धक्का दिन्छ । अहिले रुपा सुनार प्रकरणले जातीय विभेदको ‘शान्त तलाउ’ मा ठूलै छाल उत्पन्न गरिदिएको छ । यो घटना चर्चामा आउनुको मुख्य कारण अन्यायकाविरुद्ध पीडित नै अगाडि आउनु हो । यसखालका अधिकांश घटनाहरु दबिएरै सेलाउँछन् । रुपाले यसको प्रतिकार गर्नु उनमा भएको क्षमता र आत्मविश्वासको परिणाम हो, जो प्रशंसनीय छ ।
अरु व्यक्तिहरुले जस्तै, आफ्नो जात लुकाएर उनी पनि चुपचाप कतै डेरा खोजेर बस्न सक्थिन् वा आफ्नो नियति र भाग्यलाई दोष दिँदै ती ‘घरभेटी आमा’ लाई पुरै वेवास्ता गर्न सक्थिन् । तर रुपाले त्यसो गरिनन् । आफूमाथि भएको विभेदलाई समाजसामु छर्लङग पारिदिइन् र विभेदकारी महिलालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिन्, ताकि जातीय छुवाछुत गर्नेहरुले केही न केही पाठ सिकुन् ।
तर, समाज र राज्य व्यवस्था त्यति सहज हुन्थ्यो भने हजारौं रुपाहरुले पुस्तौंदेखि आफू पनि मानिस नै हुँ, मेरो शरीरमा पनि अरुको जस्तै रातै रगत बग्छ भनेर प्रमाण पेश गरिरहनु पर्दैनथियो । जुन घरभेटीले जातीय विभेदको ‘अपराध’ गरेर प्रहरी हिरासतमा पुगिन्, राज्यव्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्री नै उनलाई छुटाउन दलबलसहित पुगे । अझ सामाजिक सञ्जालमा त रुपा सुनारलाई नै दुत्कार्दै कयौं मानिसहरु यसरी प्रस्तुत भए कि, मानौं जातीय छुवाछुत गर्न पाउनु कथित माथिल्लो जातकी घरभेटीको अधिकार हो । ‘अपराध’ त त्यो डेरा खोज्दै आउने केटीको हो जसले आफू तल्लो जातको भनेर जान्दाजान्दै पनि कथित माथिल्लो जातको घरमा डेरा खोज्न पुगी । अनि विभेदकारी उनका वचन चुपचाप सहनुको सट्टा घरभेटीलाई नै पुलिस लगाएर पक्राउ गराइदिई ।
मानौं जातीय छुवाछुत गर्न पाउनु कथित माथिल्लो जातकी घरभेटीको अधिकार हो । ‘अपराध’ त त्यो डेरा खोज्दै आउने केटीको हो जसले आफू तल्लो जातको भनेर जान्दाजान्दै पनि कथित माथिल्लो जातको घरमा डेरा खोज्न पुगी । अनि विभेदकारी उनका वचन चुपचाप सहनुको सट्टा घरभेटीलाई नै पुलिस लगाएर पक्राउ गराइदिई ।
वास्तवमा रुपाको घटना त एउटा उदाहरण मात्र हो । दलित भएकै कारण काठमाडौंमा डेरा नपाएर हैरानी ब्यहोर्नुपरिरहेका सयौं उदाहरण छन् । मैले चिनेजानेका वा मेरा साथीहरु कतिपयले आफ्नो जात र थर लुकाएर डेरामा बस्ने गरेको बताउँछन् । यसरी बस्दा उनीहरुले आफूलाई घरभेटी र वरपरकाले आफ्नो वास्तविक जात थाह नपाओस् भनेर जहिल्यै तनाव लिइरहनु पर्छ । आफ्नो अस्तित्व लुकाएर बस्नुपर्दा मान्छेलाई कति मानसिक तनाव होला त्यो त भोग्नेलाई नै थाह हुने कुरा भयो । जातकै कारण सधैँ तनाव लिएर बस्नुपर्ने मानिसले कसरी आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न सक्छ ?
यो त काठमाडौंमा डेराको समस्याको कुरा भयो । जातीय विभेदको समस्या यतिमा मात्रै सिमित छैन । के गाउँ के शहर, के पहाड के तराई हरेक क्षेत्र र समुदायभित्र विभेद छ । फरक यति हो की गाउँघरमा सानै झुपडी भए पनि मानिसको आफ्नो ‘घर’ हुन्छ । शहरमा शिक्षा, रोजगारीको शिलशिलामा अरुको घरमा डेरा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । हुन त घरमूलीले आफ्नो घर कसैलाई भाडामा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार उसैको हो । तर जातकै कारण डेरा नदिनु भनेको सामाजिक अपराध नै हो ।
वास्तवमा छुवाछुतलाई राज्यले दण्डनीय अपराध मानेपनि राज्यकै तर्फबाट यो संस्थागत भइरहेको छ । हामीले जहिलेसम्म आफ्नो नामको पछाडि फलानो जात भनेर झुुन्ड्याइरहन्छौं, जातीय व्यवस्था रहिरन्छ । जातीय व्यवस्था रहनुको अर्थ छुवाछुत र भेदभाव पनि कायमै रहनु हो । यो पुस्तौंदेखि चलिआएको चलन हो र त्यही चलनलाई हाम्रो समाजिक संस्कारले मान्यता दिँदै आएको छ । यदि साच्चिकै हाम्रो समाजबाट छुवाछुतजन्य विभेद हटाउने हो भने सर्वप्रथम हरेक नागरिकले आफैबाट सुरुवात गर्नु पर्छ । ‘म जातका आधारमा भेदभाव र छुवाछुत गर्दिनँ’ भनेर हरेक व्यक्ति प्रतिवद्ध हुनैपर्छ ।
दोस्रो, राज्यले विभिन्न कोटा वा आरक्षणका नाममा जातीय सोच कायमै राखिदिएको छ । वास्तवमा कुनै जातको आधारमा आरक्षण (कोटा) छुटुयाउनु हुँदैन । वर्षौंदेखि पछाडि पारिएको समूदाय भनेर दलितका नाममा कोटा छुट्याउने कुरालाई सामान्यतया सकारात्मक मान्न सकिएपनि त्यसले जातीय अन्तरलाई कायमै राख्न मद्दत गर्छ । आरक्षण कोटा आर्थिक हैसियतका आधारमा छुट्याउनुपर्छ न कि जातका आधारमा । दलित भन्दैमा सबै ब्यक्तिहरु गरिब छैनन् र बाहुन क्षत्री हुँदैमा सबै शासक पनि बन्दैनन् । कयौं दलित समुदाय सम्पन्नशाली छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा अध्ययनका लागि पठाउने क्षमता राख्छन् । कैयौं बाहुन क्षेत्रीहरु गरिबीका कारण भारतका गल्ली र अरबका खाडीहरुमा अर्काको गुलामी गर्न बाध्य छन् ।
दलित भन्दैमा सबै ब्यक्तिहरु गरिब छैनन् र बाहुन क्षत्री हुँदैमा सबै शासक पनि बन्दैनन् । कयौं दलित समुदाय सम्पन्नशाली छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा अध्ययनका लागि पठाउने क्षमता राख्छन् । कैयौं बाहुन क्षेत्रीहरु गरिबीका कारण भारतका गल्ली र अरबका खाडीहरुमा अर्काको गुलामी गर्न बाध्य छन् ।
तर, जातका आधारमा दिइने कोटा र आरक्षण भारतका गल्लीहरुमा डुल्ने बाहुनले होइन, बरु सम्पन्न र टाठाबाठा दलितहरुले उपभोग गरिरहेका छन् । यसले गर्दा समाजमा अर्को विभेद खडा हुँदै गएको छ । पछिल्ला केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा रुपा सुनार र दलित समुदायको विपक्षमा उठेका आवाजहरु त्यही आरक्षणको जगबाट उत्पन्न इगोको परिणाम हो । यदी आर्थिक आधारमा जनताको संरक्षण नगरेर राज्यले जातकै आधारमा गर्ने हो भने जातीयता हट्ने होइन, बरु थप झांगिदै जाने निश्चित छ ।
यस्तै, कतिपय आईएनजीओ, एनजीओहरुले पनि घुमाउरो ढंगले जातीयता कायमै राख्न चाहन्छन् । यसरी एनजीओ चलाउने व्यक्तिहरु प्रायः दलित समुदायकै छन् । उनीहरुले जातकै नाममा राम्रै कमाउ धन्दा चलाइरहेका छन् । यदी छुवाछुत अन्त्य भयो भने उनीहरुको कमाइ पनि बन्द हुन्छ । त्यसकारण उनीहरु मुखले जातीय व्यवस्था हटाउने कुरा गरेपनि व्यवहारमा त्यसलाई कायम राख्न मात्रै होइन अझै विभेद बढाउन चाहन्छन् ।
हाम्रो सामाजिक संरचना र राज्यले जातीय व्यवस्था कायमै राख्न खोजेपनि त्यो हिजोकै अवस्थामा छ भन्ने होइन । छुवाछुत जस्तो कुप्रथा हट्दै पनि गइरहेको छ । अझ कतिपय समुदायमा यो प्रथा छैन वा नगन्य मात्रामा मात्रै छ । म आफू थारु समुदायमा जन्मे हुर्केको व्यक्ति, मैले आफ्नो समुदायमा छुवाछुतलाई मान्यता दिएको अनुभव गरेको छैन । थारु समुदायमा जातका आधारमा कसैलाई अछुतो मान्ने प्रचलन मैले जानेबुझेसम्म छैन । यस्तै, अन्य कतिपय जनजातीहरुले पनि छुवाछुत मान्दैनन् ।
नेपाली समाजमा कलंकको रुपमा रहेको यस जाती प्रथालाई जतिसक्दो छिटो उन्मुलन गर्न आवश्यक छ । अहिलेको २१ औँ शताब्दिमा पनि मान्छेले मान्छेसँग छोइछिटो गर्नु भनेको मुर्खता मात्रै हो । यस्तो मुर्खतापूर्ण अन्धविश्वासमा बाँचेर सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन । हरेक सभ्य मानिसलले छुवाछुतको तलाउमा ढुंगा हान्नैपर्छ । विभेदविरुद्ध बोल्न साहस गर्ने रुपाहरुलाई सबै मिलेर अझै हौसला दिऊँ ।
← पूर्वी भारत क्षेत्रीय सदस्य धन बहादुर बिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली
विभेदकारी किन भयो ? →
कोभिड–१९ ले किसानमाथि परेको असर र राज्यको दायित्व
गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदीय दलको नेतामा पियारी थापा
भारतीय सेनामा नेपाली महिलाको भर्ना तुरन्त खारेज गर : पाँच महिला संगठन